12/05/13 ~ Myanmar Forward
ရင်သားပေါ်အောင် ဓာတ်ပုံရိုက်မိ၍ နောင်ဓာတ်ပုံ ဘယ်တော့မှ မရိုက်တော့ဟု ဆိုသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး ဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် မြန်မာ မော်လ်ဒယ်
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဂျာနယ်တစ်ခုရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းက ဖော်ပြခံရတဲ့ ရင်ဟိုက် ဓာတ်ပုံကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရတဲ့ မော်ဒယ်မြနှင်းရည်လွင်က လာမယ့်နှစ် ကစပြီး ဓာတ်ပုံမော်ဒယ် အဖြစ် ဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်သွားမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ မြန်မာတိုင်းမ်ကို ပြောပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်ထုတ် ဃနူနဘမငအနျ ၈ိပျေ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်ရဲ့ မျက်နှာဖုံး ဓာတ်ပုံ အဖြစ် ဖော်ပြခံရပြီးတဲ့နောက် မြနှင်းရည်လွင်က ခုလို ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာနယ်ထွက်ရှိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူမကို စော်ကားသလို ဖြစ်စေတဲ့ စာသား တွေနဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ တိုက်ခိုက်ပြောဆိုခံခဲ့ရတာကြောင့် အရှက်ရခဲ့ရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ပုံကိုရိုက်တဲ့နေ့က တစ်ပုံတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံပေါင်းများစွာကို ရိုက်ခဲ့တာပါ။ အကယ်လို့ ပုံကအမြင်မတော်ရင်လည်း သူတို့ အနေနဲ့ တခြားဓာတ်ပုံကို ရွေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတင်လိုက်တော့
By နန္ဒာအောင် - မြန်မာတိုင်း(မ်)
အင်ဒိုရှိ မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲရန်ကြံစည်သူက တရားရုံးတွင် ဖြောင့်ချက်ပေးဝန်ခံ
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under သတင်းများ | No comments
ကြာသပတေးနေ့က တရားခွင်တွင် အဆိုပါ လုပ်ရပ်ကို မိမိစီမံခဲ့ကြောင်း သံသယ တရားခံက ဖြောင့်ချက်ပေးဝန်ခံခဲ့ပြီး မွတ်ဆလင်တို့ကို ဆန့်ကျင်သူ အားလုံးအပေါ် ဆက်လက်၍ စစ်ကြေညာနေမည်ဟုလည်း ပြောကြား
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲရန် ကြံစည်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်အား နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သူက အပြစ်ရှိကြောင်း ဖြောင့်ချက်ပေး ဝန်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့က တရားခွင်တွင် အဆိုပါ လုပ်ရပ်ကို မိမိစီမံခဲ့ကြောင်း သံသယ တရားခံက ဖြောင့်ချက်ပေးဝန်ခံခဲ့ပြီး မွတ်ဆလင်တို့ကို ဆန့်ကျင်သူ အားလုံးအပေါ် ဆက်လက်၍ စစ်ကြေညာနေမည်ဟုလည်း ပြောကြားသွားသည်။ အသက်(၂၃)နှစ်ရှိ ဆီဂျစ်အင်ဒရာဂျစ်သည် အစ္စလာမ်မစ်အစွန်းရောက် အချို့ကို Facebook မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်စုစည်းကာ ဂျကာတာမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမျိုးရေး ပြဿနာများက အင်ဒိုအထိ ပျံ့နှံ့ ရိုက်ခတ်လာပြီးနောက် မေလတွင် ဆီဂျစ်တို့အဖွဲ့က မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲခြင်းဖြင့် လက်တုံ့ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟု သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းဒေသတွင် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်များ အနေဖြင့် ဖိနှိပ်ခံနေရသည်ဟု ယုံကြည်သည့်အတွက် ယခုလို ကြံစည်ခြင်းဟု ဆီဂျစ်က ဂျကာတာ တောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ "ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော် အစပြုခဲ့တာပါ"ဟု ၎င်းက ဝန်ခံခဲ့သည်။ တရားသူကြီးက ၎င်း၏ လုပ်ရပ်အပေါ် နောင်တရမရ မေးမြန်းရာ ဆီဂျစ်က အသံကိုမြှင့်ပြီး "လုံးဝပါပဲ။ ဒါဟာ မြန်မာအပြင် မွတ်ဆလင်တွေကို သူတို့စိတ်တိုင်းကျ ဖိနှိပ်ဆက်ဆံနေသူ အားလုံးကို သတိပေးလိုက်တာပါ"ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
၎င်းက "မွတ်ဆလင်တွေကို နှိပ်ကွပ်နေမှုတွေ ရှိနေသ၍ ကျွန်တော် တိုက်ပွဲဝင်နေမှာပဲ"ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆီဂျစ်သည် အင်ဒို၏ တင်းကျပ်သော အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ စွဲချက်(၃)ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ယင်းတို့အနက် လက်နက်နှင့် ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ လက်ဝယ်ထားရှိမှု စွဲချက်သည်လည်း အကျုံးဝင်နေပြီး အမြင့်ဆုံး ချမှတ်နိုင်သည့် ပြစ်ဒဏ်မှာ သေဒဏ်ဟု သိရှိရသည်။ ဆီဂျစ်က Facebookပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများအကြောင်း ဖတ်ရှုမိသည့်နောက် ဒေသတွင်းရှိ မွတ်ဆလင်တို့ကို စည်းရုံးကာ သံရုံးကို တိုက်ခိုက်ရန် အကြံရလာကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြေအနေများကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ယူဆကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
၎င်းသည် ဆီပာရီယာနိုအမည်ရှိ ကြံဖော်ကြံဖက်တစ်ဦးကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဆီပါရီယာနိုသည်လည်း ဆီဂျစ်နှင့် အလားတူပင် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။ "ကျွန်တော်သူ့ကို ပြောခဲ့တယ်။ သံရုံးကို ဗုံးခွဲရအောင်လို့လေ။ သူကလည်း သဘောတူခဲ့တယ်"ဟု ဆီဂျစ်က ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုတွင် အစ္စလာမ်မစ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်ဟု အမည်တပ်ထားသည့် ကွန်ရက်တစ်ခုကလည်း ဆက်နွယ်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မေလ(၂)ရက်နေ့တွင် တိုက်ခိုက်မည့် အစီအစဉ် မတိုင်မီတွင် အင်ဒိုရဲများက ပိုက်ဆက်ဗုံးများ သယ်ဆောင်လာသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆီဂျစ်သည် Facebookပေါ်တွင် အခြားသော ကြံဖော်ကြံဖက်များနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သလို ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက် လက်စားချေရန် နှိုးဆော်မှုများကိုလည်း ရေးသား လွှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရ ရှေ့နေများက ဆိုသည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ဒဏ်ကို ယခင်ကတည်းက ခံစားခဲ့ရဖူးသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပိုင်းများအတွင်း ဘာသာရေး အစွန်းရောက် ကွန်ရက်အချို့ကို ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲလာနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
facebook account phone number lock ကျရင် ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖွင့်လို့ ရမယ့်နည်းလမ်းကိုပြောပြသွား မှာဖြစ်ပါတယ်
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under နည်းပညာ | No comments
November 14 ရက်နေ့ က MMUG မှာ
post တင်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တာ
ကြောင့် အဆင်မပြေတဲ့သူတွေရှိခဲ့ရပါတယ်
အဖြစ်များတဲ့အခက်အခဲက Textplus ကို Yuilop က
confirm code မပို့ တာပါပဲ
တစ်ဆင့်ချင်းစီ ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
Credit>>> သဇင် ကိုကို
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under မှုခင်း | No comments
၄-၁၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၉၃၀ အချိန် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ xxxxကျေးရွာနေ မxxxx(ခ)မxxxx (၁၅)နှစ်သည် မိဘများပိုင်သည့်ရွာအရှေ့ဘက်ယာတဲတွင် တူမများဖြစ်သည့် မxxxx(၄)နှစ်၊ မxxxx(၂)နှစ် တို့နှင့်အတူရှိနေစဉ် ရေပုတ်ကလေးရွာနေ ဦးကျော်ရင်(၇၀)နှစ်ရောက်ရှိလာပြီး ““ငရုပ်သီးဝယ်လိုကြောင်း”” ပြောသဖြင့် ငရုပ်ခင်းထဲသို့လိုက်လံခူးပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ငရုတ်သီးခူးနေစဉ် ဦးကျော်ရင်မှာ နောက်မှ လိုက်လာကာ မxxxxအားမျက်လုံးကိုအ၀တ်ဖြင့်စည်း၍ လူကိုတွန်းလှဲပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီအားဆွဲချွတ်၍ သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစဉ်ခဲ့သောကြောင့် ကလေးများမှအော်ဟစ်ကြရာ ဦးကျော်ရင်မှာထွက်ပြေးသွား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မxxxx(ခ)မxxxxမှ မိဘများပြန်ရောက်လာစဉ် အကြောင်းစုံပြောပြသဖြင့် ဦးကျော်ရင်အားအရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားခဲ့သောကြောင့် ပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်း(ပ)၈၇/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၇၆/၅၁၁ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာ ဖိလစ်ပိုင် သဘောတူညီချက်အချို့ လက်မှတ်ထိုး
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
မနီလာမြို့က သမ္မတ အိမ်တော်မှာ တွေ့
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ခရီးစဉ် ဒုတိယနေ့မှာ မြန်မာနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရေး ဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက် နှစ်ခု လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတရုံး ဝက်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူ့ ခရီးစဉ် အတွင်း ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသားတွေ ဗီဇာ မလိုဘဲ မြန်မာ နိုင်ငံကို သွားရောက်နိုင်ခွင့် အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင် ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တွေ လက်မှတ်ထိုးဖို့လည်း ရှိပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး ပြည်ပရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ကျန်တဲ့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ အမီ လိုက်နိုင်စေဖို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုလာကြဖို့နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီတွေ ပေးကြဖို့ကိုလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တိုက်တွန်းခဲ့ တယ်လို့ အေပီ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသားစာပေဆုရှင် ဆရာမ နှစ်ဦးကို အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမများက ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ပြု
အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသမီးတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ဟာက မင်္ဂလာ သိပ်ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီစာရေးဆရာမ နှစ်ဦးစလုံး ဟာလည်း ကျမတို့တတွေ အားလုံး ကြည်ညိုလေးစား ရတဲ့သူ တွေဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ သူတို့ရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး အားကျလေးစားခဲ့ရ သူတွေ
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသား စာပေဆုရှင်များအနက် အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမ နှစ်ဦးကို တခြားသော အမျိုးသမီး စာရေး ဆရာမများက အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုတဲ့ အစီအစဉ်တခုကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ မနက်က ဗဟန်း ရေတာရှည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Idea လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမများရဲ့ ဂုဏ်ပြုခံရသူတွေကတော့ တသက်တာ စာပေဆုရှင် ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ဆွေဦးနဲ့ ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ် အတွက် အမျိုးသား စာပေဆုရှင် စာရေးဆရာမ ခင်မြဇင်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပွဲကို မနက် ၁၀ နာရီကနေ ၁၂ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး စာရေးဆရာမ ၆၀ ကျော်နဲ့ စာရေးဆရာ ၅ ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲကို ဦးဆောင်စီစဉ်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမ နှင်းဝေငြိမ်းက သူ့အနေနဲ့ ဒီပွဲဖြစ်ပေါ်လာဖို့ စိတ်ကူးကို နှစ်ပတ်တကြိမ် ပြုလုပ်နေကျဖြစ်တဲ့ ဘူတာကြီး စာဖတ်ဝိုင်းကနေ စတင် ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စာဖတ်ဝိုင်းကို လာနားထောင် ကြတဲ့ စာချစ်သူ ပရိသတ်တွေနဲ့ စာရေးဆရာ/ ဆရာမတွေက သူတို့ချစ်ခင်ကြတဲ့ စာရေးဆရာမနှစ်ဦးကို သီးသန့် အစီအစဉ် တခုနဲ့ ဂုဏ်ပြုချင်တာကြောင့် ဒီပွဲကို စီစဉ်ဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာလို့လည်း သူက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
“၂၀၁၂ ခုနှစ် ရဲ့ ဆုရှင် အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမနှစ်ဦးကို အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမများမှ အမှတ်တရဂုဏ်ပြုပွဲ” ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ် တပ်ရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဆရာမနှင်းဝေငြိမ်းက “ဒီခေတ်မှာ အမျိုးသမီး အမျိုးသား အခွင့်အရေး တန်းတူပဲလို့ ပြောနေကြပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ တန်းမတူခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုအခါမှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသမီးတွေကို
ဂုဏ်ပြုတဲ့ဟာက မင်္ဂလာ သိပ်ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီစာရေးဆရာမ နှစ်ဦးစလုံး ဟာလည်း ကျမတို့တတွေ အားလုံး ကြည်ညိုလေးစားရတဲ့သူ တွေဖြစ်တဲ့အတွက်၊ သူတို့ရဲ့စာတွေကို ဖတ်ပြီး အားကျလေးစားခဲ့ရ သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့်ပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီပွဲကို တက်ရောက်လာသူအများစုဟာ အမျိုးသမီးစာရေး ဆရာများနဲ့ အယ်ဒီတာများ ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသား စာပေဆုရှင် ဆရာမနှစ်ဦးကို အမှတ်တရ ပန်းချီကားတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေတွေ ပေးအပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အမျိုးသားစာပေဆု ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဝင်းငြိမ်းလည်း ဒီပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သူက ဆရာမနှစ်ဦးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ ဒီနှစ်ရဲ့ စာပေဆုတွေအပေါ် စာပေ လောကသားတွေ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ရှိလာခြင်းဟာ ဆုရွေးခြယ်ရေး ပုံစံ ပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်မယ်လို့
ဆုတွေအတွက် မဲပေးရာမှာ လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အပြင် မဲရေတွက်ရာမှာ ပရိုဂျက်တင်းလုပ်ပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရေတွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း ဦးဝင်းငြိမ်းက ဆိုပါတယ်။
ဒီပွဲဖြစ်မြောက်အောင် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ကူညီသူတဦးဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမ မြသွေးနီကလည်း “ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာရေးဆရာမ တဦးဖြစ်တယ်၊ အခု ဆုရတဲ့ စာရေးဆရာမ နှစ်ဦးကလည်း စာပေလောကမှာ ကောင်းတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်း ခဲ့တဲ့သူတွေ၊ အားကျ စံနမူနာ ထားရတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်တွေ စာရေးဆရာမတွေ အားလုံး တစုတဝေးတည်း ဆုံတွေ့ကြရမယ့် ပွဲလည်း ဖြစ်တယ်၊ ကျမတို့ နောက်မျိုးဆက်သစ် စာရေးဆရာမတွေ အားလုံး စံနမူနာ ယူသင့်တဲ့ပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျမတို့ ပါဝင်သင့်တယ်လို့ ယူဆပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ။ ကူညီ ဝိုင်းဝန်းပေးခဲ့တာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
စာရေးဆရာမနှစ်ဦးရဲ့ စာပေလက်ရာများနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း ဆရာမ မြသွေးနီက “ဆရာမ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ စာတွေကို နှစ်သက် သဘောကျခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမကြီး ခင်ဆွေဦးဆိုရင် သူရဲ့စာတွေက ဟိုးကတည်းက ခေတ်မီတယ်။ ဆရာမကြီးရဲ့ ဝတ္ထုတွေမှာ ကဗျာတိုလေးတွေကို ထည့်ပြီး ရေးဖွဲ့တဲ့ဟန်ကို အရမ်းသဘောကျ ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမ ခင်မြဇင်ကျတော့ ကဗျာဆရာမ တဦးလည်း ဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ စာတွေဟာ ရိုးဂုဏ်တွေနဲ့ ပြည့်ဝနေပြီး သူ့စာတွေက အပြင်က သူ့ပုံစံအတိုင်း တထပ်တည်းကျတယ်၊ သိပ်သဘောကျစရာ ကောင်းပါတယ်” လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
အမျိုးသားစာပေဆုရှင် စာရေးဆရာများကို ထပ်ဆောင်း ဂုဏ်ပြုပွဲတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အစဉ်အလာဟာ အရင်ကတည်းကလည်း ရှိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီပွဲတွေဟာ ထုတ်ဝေသူတွေ၊ မြို့နယ် အသင်းအဖွဲ့တွေက ပြုလုပ်ပေးတာ၊ နီးစပ်ရာ အသိမိတ်ဆွေ များက ပြုလုပ်ပေးတာမျိုးသာ ဖြစ်ပြီး အခုလို စာရေးဆရာအချင်းချင်း၊ အမျိုးသမီးစာရေးဆရာမ အချင်းချင်း ဂုဏ်ပြု ပြုလုပ်ပေးခြင်းမျိုး မရှိခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဂုဏ်ပြုခံရသူ ဆရာမ ခင်မြဇင်က “စာရေးဆရာမတွေက ကျမနဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ဆွေဦးတို့ကို ချစ်လို့ ဒီပွဲကို လုပ်ပေးတာပါ။ ဒီအတွက် ကျမ အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလို အများစုပေါင်းပြီး ငွေကြေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်တွေ ထည့်ဝင်ကြတဲ့ အတွက်တော့ သူ့အနေနဲ့ အရမ်း
အရင်က မန္တလေး၊ တောင်လေးလုံး ကျောင်းတိုက်မှာ စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို အစဉ်အလာကြီးမားစွာ ကျင်းပ ခဲ့ကြသလို လူထုဒေါ်အမာ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က စာပေချစ်သူတွေ ဆုံစည်း ကြဖို့အတွက် ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ဆွေဦးရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို သူ့မွေးနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တိုင်းမှာ လာမယ့်နှစ်က စတင်ပြီး
ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစား စီစဉ်သွားကြမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း ဒီပွဲကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ စာရေးဆရာမတွေက သဘောတူညီခဲ့ကြ ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသား စာပေဆုရှင်တွေကတော့ ထက်နိုင် (တလုပ်မြို့) က “မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကား” စာအုပ်နဲ့ (ဝတ္ထုရှည်ဆု)၊ ခင်မြဇင်က “ကောင်းကင်မိုးတိမ်” စာအုပ်နဲ့ (ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဆု)၊ ကို (တက္ကသိုလ်) က“ မြကန်သာ ကဗျာပေါင်းချုပ်” စာအုပ်နဲ့ (ကဗျာပေါင်းချုပ်ဆု)၊ ဒေါက်တာခင်လက်ျာက “ဖေဖေဗိုလ်လက်ျာ” စာအုပ်နဲ့ (စာပဒေသာဆု)၊ စတီဗဲင်နီကိယိုက “ချင်းယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း” စာအုပ်နဲ့ (မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အနုပညာဆိုင်ရာဆု)၊ ရွှေမြိုင်ပြုံးလဲ့မော် က “အရုဏ်ဦးမှာဖူးတဲ့ပန်း ကလေးကဗျာများ” စာအုပ်နဲ့ (ကလေးစာပေဆု)၊ မောင်မြင့်ကြွယ်က “မြန်မာပြည်မှနေ့ရက်များ” စာအုပ်နဲ့ (ဘာသာပြန်ဆု – သုတ)၊ တင်မောင်မြင့်က “ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်” စာအုပ်နဲ့ (ဘာသာပြန်ဆု – ရသ)၊ မောင်ဟုန်ဝမ် (ကထိက) က “မင်းသုဝဏ်နှင့် ကဗျာ ကဗျာလေ့လာချက်” စာအုပ်နဲ့ (သုတပဒေသာဆု-ဝိဇ္ဇာ)၊ ကျော်ဦးက “ရေကြည်တပေါက်” စာအုပ်နဲ့ (သုတပဒေသာဆု – ရိုးရိုးသိပ္ပံ)၊ ဒေါက်တာခင်စန်းမော်က “တိရစ္ဆာန်မှ လူကိုကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ” စာအုပ်နဲ့ (သုတပဒေသာဆု – အသုံးချသိပ္ပံ)၊ ကျော်ဝင်းက “မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လေ့လာဆန်းစစ်ချက်” (၁၉၄၈ – ၁၉၈၈) စာအုပ်နဲ့ နိုင်ငံရေး စာပေဆု၊ မြင့်အောင်က Revealing Myanmar’s Past: An Anthology of Archaeological Articles စာအုပ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ – သုတဆု တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒီပွဲမှာ စာရေးဆရာမကြီး ခင်ဆွေဦး၊ စာရေးဆရာကြီး အောင်သင်းနဲ့ သိပ္ပံမှူးတင်တို့ကို တသက်တာစာပေဆုများ ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
"Gender & Development"
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
-လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအားပြိုင်ပွဲဟာ တခါလာ မဲပြာပုဆိုးဇတ်လမ်းပဲ..။ ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်း ကို အခြားသော အမြင်သစ်နဲ့ ချဉ်းကပ်သင့်ပြီလို့ လည်းထင်မိတယ်..။ တခါက လေလှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်က ဒီအကွဲအပြဲကို လင်ကွဲမယားကွဲ နဲ့ တင်စားသွားတာ ကြားလိုက်ရတယ်..။
-စစ်အုပ်စုကို ယောကျာ်း၊ ဒေါ်စုတို့ အတိုက်အခံအဖွဲ့ ကို မယား ပေါ့...။ သူ့ ဥပမာက သင့်မြတ်လှတယ်..။ စစ်ရဲ့ သဘော ကိုက ယောကျာ်းပီသမှု (masculinity) ကိုဦးတည်ပြီး ကာကွယ်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း စသဖြင့် ထိန်းချုပ်မှု (control) ရဲ့ သရုပ်သကန်။ အမျိုးသားဝါဒ (Nationalism) ရဲ့ ပြယုဂ်။ တဖက်မှာ လည်း... ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ၊ ဒီမိုကရေစီတို့ ဆိုတာမျိုးက အမေတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခွင်မျိုး (caretaker) ကို ညွှန်းဆိုလေ့ ရှိတာကိုး..။
- ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဆန့် ကျင်ဘက် ၂ ခုဟာ တစ်ခုမရှိပဲ တစ်ခုရပ်တည်လို့ မရ။ အမေရှိရင် အဖေကရှိကိုရှိရတော့မှာကိုး..။ ဒီမိုကရေစီတို့ ၊ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ဆိုတာ စစ်တပ်မပါဘဲနဲ့ ရေရှည်မတည်တံနိုင်။
- ကျားမဆက်ဆံရေး (Gender relation) နဲ့ ပါတ်သက်လာရင် အခွင့်အရေးကို ကျူးလွန်ဖေါက်ဖျက်သူ (perpetrator) က ယောကျာ်းဖြစ်လေ့ရှိပြီးတော့ ခံရသူဒုက္ခသည် (victim) က မိန်းမဖြစ်လေ့ရှိတတ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ..။
- ဒီလို " ယောကျာင်္း = ဗီလိန်၊ မိန်းမ = ဓါးစာခံ " သမရိုးကျအမြင်နဲ့လိင်ခွဲခြားမှု ပြဿနာတွေကို ကိုယ်တွယ်ခဲ့ကြရာမှာ ဘယ်လို မှအောင်မြင်မှုမရတဲ့အပြင် ဆေးကြောင့်ပဲ လေးဆိုသလိုဖြစ်လာခဲ့သတဲ့..။ ရလဒ်အနေနဲ့ ကတော့...ဒီ လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို တင်သွင်းလာတဲ့.. ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေက လူတွေဟာ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ကယ်တင်ရှင် (savior) ဆင်းရဲလှတဲ့ တိုင်းပြည်က မိန်းမတွေကိုကြတော့ ကယ်ဆယ်ရမယ့်သတ္တ၀ါ (victim) ယောကျာ်းတွေကိုတော့ အကြမ်းဖက်သမားလူဆိုး (perpetrator) ဆိုတဲ့ အခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်မိပြီးသားဖြစ်သွားတော့တယ်...။ ဒီမှာပဲ...လူမှုရေးအပြောင်းအလဲ (social change) မဖြစ်တော့ပဲ လူမှုရေးတွေ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့ တော့တာပဲ..။
- အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုင်တွယ်ရမယ့်ပြဿနာဟာ တရားခံ၊ တရားလို နဲ့ တရားသူကြီးဆိုတဲ့ အခင်းအကျင်းလောက် ရိုးစင်းခြင်းမရှိပဲ....နောက်ကွယ်မှာ တိမ်မြုပ်နေတဲ့ လူမှုရေးစံနှုန်းတွေ (social norms) တွေ၊ လူမျုရေးကျင့်ထုံးတွေ (social institutions) လူ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုရဲ့ တည်ဆောက်ချက် အကန့် အသတ် (structural constraints) တွေဟာ...နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပါဝင်ပတ်သက်နေလို့ ပဲ..။
- ဥပမာ....မုဒိမ်းကျင့်တာကို ယောကျာ်းပီသခြင်းလို့ ခံယူတဲ့ အသိုင်းဝိုင်းထဲက စစ်သားတစ်ယောက်ဟာ ဒီမကောင်းတဲ့အမှုကို အခွင့်အရေးကြုံ့ပါလျက်မလုပ်ပဲ နေတယ်ဆိုပါစို့ ...။ သေချာတာက ဒီစစ်သားဟာ အပေါင်းဖေါ်တွေရဲ့ လှောင်ပြောင်ရှုံ့ ချမှု (mockery) ကိုခံရမယ်..။ သူတို့ တွေရဲ့ ဖိအားပေးမှု (peer pressure) ကိုခံရမယ်..။ အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ သူရဲဘောကြောင်သူအဖြစ် နဲ့ သတ်ဖြတ်ပစ်တာမျိုးတောင် ခံရလေ့ရှိသတဲ့..။ ဒီနေရာမှာ...အာရှသားယောကျာ်းတွေ ထမင်းဟင်းချက်တာကို မိန်းမအလုပ်အဖြစ် မလုပ်လိုတာ..ဂျပန်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ရှင်မရဲ့ အိမ်မှုကိစ္စကို ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးရင် အခြားသောယောကျာ်းတွေက လှောင်ပြောင်အပစ်တင်တာမျိုးဟာလည်း ဒီ social norms ပြဿနာပဲ..။
- ဒီလိုပဲ..ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကြပ်မတ်ခြင်းကို အမျိုးသားရေးတာဝန်လို့ ခံယူထားတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုပင် ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးစေဦးတော့...သူ့ ရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း တပ်ထဲမှာတော့ ဒီမိုကရေစီကို ကျူးလွန်ဖေါက်ဖျက်သူ၊ ဒီမိုကရေစီစံကိုက်မဟုတ်သူအနေနဲ့ မြင်ရမှာပဲ..။
- ဒါဖြင့်ရင်..ဒီပြဿနာကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ..။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ပါဝင်ပူးပေါင်းစေခြင်း (inclusion) ပါတဲ့..။ ဆိုလိုတာက.. အမျိုးသမီးဘ၀ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ယောကျာ်းတွေကိုပါ ပါဝင်စေတာ.(participatory).။ အမျိုးသမီးတွေကို အလုပ်အကိုင်ပေးတဲ့ ပရောဂျက်တွေမှာ အမျိုးသားတွေကိုပါ အလုပ်ပေးတာ..။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအသိပညာပေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ယောကျာ်းတွေကိုပါ တက်ရောက်စေတာ စသဖြင့်ပါတဲ့..။ တကယ်တော့...မိန်းမတွေကို အကာအကွယ်ပေးရင်းနဲ့ ယောကျာ်းတွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်ဆိုရင်အဆုးံမတော့ အမျိုးသမီးတွေပဲ ပြန်လည်နစ်နာစေတာကိုး..။ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်လို့ ဆိုသကိုး..။
-ဒီလိုပဲ..စစ်သားတွေကို ဒီမိုကရေစီအသိပညာပြန့် ပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်စေတာ၊ ဒီမိုကရက်တစ် အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံစေတာ စသဖြင့် လုပ်ဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်မိတယ်..။
-နောက်တစ်ခုက လိင်ကွဲပြားမှု အပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ..။ မိန်းမတွေဟာ ယောကျာ်းတွေနဲ့ နေရာတကာမှာတန်းတူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တန်းညှိတဲ့ အမြင်ထက် မိန်းမတွေဟာ ယောကျာ်းတွေရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တန်းတူရသင့်တယ် (equal rights)ဆိုတဲ့အ မြင်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး တောင်းဆိုဖို့ ပညာပေးစည်းရုံးဖို့ ပဲ...(convincing)..။
- ဒီလိုပဲ....စစ်တပ်ကလူတွေနည်းတူ အခြားသော အရပ်ဖက်ကလူတွေဟာလည်းပဲ တန်းတူအခွင့်အရေးရသင့်တယ်...ဆိုတာကို ခိုင်ခိုင်မာမာစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ရမယ်...။ အသိပညာပေး ဟောပြောနိုင်ရမယ်....။ ဒါမှသာလျှင် လူ့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ တည်ဆောက်ချက် အကန့် အသတ်တွေ (structural constraints) ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပေလိမ့် မယ်..။
-အဲ နောက်တစ်ခုစဉ်းစားဖို့ က ..အခွင့်အရေးကိုကျူးလွန်ဖေါက်ဖျက်သူတွေကို အရေးယူဖို့ ဥပဒေတွေကရော အရေးမပါဘူးလား (coercion)။ ဥပဒေတွေဟာ အရေးပါတယ်...ဒါပေမယ့် ပိုအရေးကြီးတာက စာချုပ်တွေရှိရှိမရှိရှိ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းပဲ..။ ဥပမာ..အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံတကာစာချုပ်ကို အမေရိကန်က လက်မှတ်ထိုးမထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တဖက်မှာလည်း.. အာဖဂန်နစ္စတန် လို တိုင်းပြည်မျိုးက ဒီ CEDAW ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြန်ရော (signatory)။
- ဆိုလိုတာက စက္ကူစာချုပ်ထက် လက်တွေ့ မှာ ရိုးရိုးသားသားကျင့်ကြံတယ့် လူမှုကျင့်ထုံး (social institutions) တွေက ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပဲ..။
လေးမြွှာပူးကလေးငယ်များကို မိဘများနှင့်အတူတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - မင်းညီ
'ကျွန်မတို့လင်မယား မစားရင်နေပါစေ ကလေးတွေအတွက် နို့မှုန့်ဘူးလေး လှူပေးကြဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်'' အထက်ပါစကားကို ညှိုးငယ်သောမျက်လုံး တုန်ယင်သော အသံနဲ့ ပြောလာသူကတော့ မွန်ပြည် နယ် ပေါင်မြို့နယ် ဝတ်ကြီးကျေးရွာ မှ မသီတာဖြစ်သည်။ သူမသည် လွန်ခဲ့သော ခုနစ်လ ခန့်က ထူးထူးခြားခြား လေးမြွှာပူးကို မွေးဖွားခဲ့သော (တိုးတိုး၊ နှင်းနှင်း၊ ထွန်း ထွန်းနဲ့ နွေးနွေး) လေးမြွှာပူးမောင်နှမ တို့၏ မွေးသမိခင်ဖြစ်သည်။ မသီတာ သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်ရွာ တည်းနေသူ ကိုမြင့်ထွေးနှင့်အိမ်ထောင် ကျခဲ့ပြီး နောက်တစ်နှစ်တွင် သားဦး အမြွှာညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကို မွေးဖွားခဲ့ သည်။
သို့သော် ထိုအမြွှာညီအစ်ကို မှာ ကံမကောင်းစွာပင် မီးတွင်းထဲမှာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်း တွင် ကိုမြင့်ထွေးတို့လင်မယားသည် သမီးမိန်းကလေးနှစ်ဦးကို ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ထပ်မံမွေးဖွားခဲ့သည်။ ယခုအခါ သမီးကြီးမှာ အသက်ကိုးနှစ် အရွယ် တတိယတန်းကျောင်းသူ ဖြစ်ပြီး သမီးငယ်မှာ အသက်လေးနှစ် အရွယ် လူမမည်အရွယ်ကလေးငယ် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ မေ ၁ရရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်တွင် မသီတာသည် သူမ ၏ လေးမြွှာပူး ရင်သွေးငယ် လေးဦးကို သထုံပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် မွေးဖွားခဲ့ သည်။ ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ ထိုနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန် ဟယ်လ်ပင်ကလေး အထူးကု ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းဆေးကုသစေခဲ့ သည်။
''မွေးဖွားစကတော့ လူတွေစိတ် ဝင်စားလို့ ငွေကြေးနဲ့ အစားအစာတို့ လှူဒါန်းပေးကြတာ ရှိပါတယ်။ ခုတော့ လူတွေလဲ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ် နေလို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီကလေး လေး ဦးနဲ့ အတော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးတွေရဲ့ နို့မှုန့်ဖိုးက လဲ အခုဆိုရင် တစ်ရက်ကို ကျပ် ၇၀၀၀ လောက် ကုန်နေတယ်။ ကျွန်တော် တို့မှာ စားဖို့အနိုင်နိုင် သူတို့နို့မှုန့်ဖိုး ကို ဘယ်လိုရှာရမှန်းလဲမသိတော့ဘူး။ ကလေးတွေက ခုနစ်လသားအရွယ် ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ စားသောက် နှုန်း တွေကလဲ တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ တိုးတိုး နေပါတယ်။ တခြား ထမင်းနဲ့ဖြည့် စွက်စာတွေလဲ ထပ်ကျွေးနေရတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘယ်လိုမှ မတတ် နိုင်တော့ဘူး''ဟု ကိုမြင့်ထွေးက ပြောသည်။ ကလေးများအား အချိန်ပြည့် ထိန်းနေရ ၍ သူကိုယ်တိုင် အလုပ်မ လုပ်နိုင်ဖြစ် နေသောကြောင့် အိမ်တွင်း ရှိ မိသားစုဝင်ရှစ်ဦး၏ စားဝတ်နေရေး မှာ အလွန်ဒုက္ခရောက်လျက်ရှိနေ ကြောင်း ကိုမြင့်ထွေးက ဆက်ပြော သည်။ ''ကျွန်တော်က ရွာထဲမှာရှိတဲ့ ကျောက်မိုင်းမှာ နေ့စား အလုပ် လုပ် ပါတယ်။ မိန်းမကတော့ အုတ်ဖုတ် လုပ်ငန်းမှာ နေ့စားလုပ်ပါတယ်။ ခု တော့ နှစ်ဦးစလုံး ကလေးထိန်းနေရ လို့ ဘယ်သူမှ အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြ တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဝင်ငွေလဲတစ် ပြားမှ မရှိတော့ဘူး''ဟု ယင်းကဆက် ပြောသည်။
ကလေးငယ် များ ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇင်းကျိုက်နှင့် ပေါင် မြို့နယ်ရှိ ဆရာဝန်၊ ကျန်းမာရေးဝန် ထမ်းများက အခမဲ့ ကုသပေးလျက် ရှိသော်လည်း လိုအပ်သည့် အာဟာ ရအတွက် မည်သည့်အထောက်အပံ့ မှ မရရှိပုံကို မသီတာက ယခုကဲ့ သို့ ပြောပြသည်။ ''ကလေးတွေမွေးခါစ အချိန်တုန်း က မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆန် တစ်အိတ်နဲ့ ဆီတစ်ပုံး လာလှူပေး သွားခဲ့တယ်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပိုက်ဆံ နှစ်သောင်းပေးခဲ့တယ်။ နောက် ပိုင်းတော့ တစ်ခေါက်မှ မလာ တော့ ဘူး။ ပေါင်မြို့မှာရှိတဲ့ စိတ္တသုခနာရေး ကူညီမှုအသင်းကတော့ နို့မှုန့် ငါးပါ ကင်ကို ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် လာလှူပေး ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ငွေကြေးတချို့ကို လည်းလှူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကလေး တွေရဲ့ နို့မှုန်သောက်တဲ့ပမာဏက နှစ် ရက် ကို တစ်ဘူး နှုန်းဖြစ်နေတော့ ဘယ် လိုမှ မလောက်တော့ဘူး။ လက်ထဲ မှာလဲ ပိုက်ဆံမရှိတော့ ဒီကလေးတွေ ကို ဘယ်လိုဆက်ကျွေးမွေးရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး''ဟု ယင်းကပြောသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ လေးမြွှာ ပူးကလေးငယ်လေးဦး၏ ကျန်းမာရေး အတွက် လိုအပ်သည့် နို့မှုန့်ဘူးများ ကို ထောက်ပံ့ပေးစေလိုကြောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက UNICEF ကဲ့သို့ အဖွဲ့ များနှင့် ဆက်သွယ်ပေးပြီး သူတို့မိသား စု၏အခက်အခဲကို ကူညီပေးစေလို ကြောင်း ကိုမြင့်ထွေးက မေတ္တာရပ်ခံ ထားသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှုဝန် ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာ နယ်မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အဆိုပါ တာဝန် ရှိသူမှ ''ကျွန်တော်တို့ လူမှုဝန် ထမ်းဌာနအနေနဲ့ ဒုက္ခရောက် နေတဲ့ သူတွေကို အကူအညီပေးဖို့ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။ အခုလို သုံးမြွှာပူးနဲ့အထက် မွေးဖွားတဲ့မိသားစုကို ကနဦး Initial Supporting အဖြစ် ငွေကျပ်ငါးသိန်း ထောက်ပံ့ဖို့ သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ အဲဒီလေး မြွှာပူး ကလေးငယ် များကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ မိဘများအနေနဲ့ လို အပ်တဲ့အကူအညီကိုရရှိဖို့ မွန်ပြည် နယ် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်း ခံဖို့ လမ်းညွှန်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လဲ မွန်ပြည်နယ်လူမှုဝန် ထမ်းဌာန ဦးစီးမှူးထံ ဖုန်းဆက်ပြီး အဲဒီ ကလေးတွေကို အကူအညီပေး ဖို့ အကြောင်းကြားပေးပါမယ်''ဟု ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
User တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကို ထိန်းသင့်လား၊ မထိန်းသင့်ဘူးလား?
ဒီတစ်​​​​​​​​​​​​​​ခါပြောမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ တကယ်လို့ သင်ဟာ Company တစ်ခုမှာ IT Administrator လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့် Company မှာရှိတဲ့ User Computer တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိန်းသင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် မထိန်းသင့်ဘူးလား ဆိုတဲ့ အ​​​ ကြောင်းအရာကို တင်ပြဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
User Computer တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိန်းသင့်တယ်
User Computer တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိန်းသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် User တွေက အလုပ်နဲ့မပက်သတ်တဲ့ Video တွေ Download လုပ်မယ်၊ Size အရမ်းကြီးတဲ့ Software တွေကို Internet Download Manager Software အသုံးပြုပြီး Download လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့် Company မှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Internet ကတော်တော်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ Video တွေကို Online ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်တာတွေ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Internet Bandwidth က​​​တော်​​​​တော်​​​​​လေးကိုနှေးသွားပါလိမ့်မယ်။ Internet Bandwidth များများတပ်ဆင်ထားရင်တော့ ကိစ္စသိပ်မရှိပေမယ့်၊ Internet Bandwidth တပ်ဆင်ထားတာလည်း နည်းမယ်၊ အသုံးပြုတဲ့ User တွေကလည်းများမယ်၊ Internet Download Manager Software အသုံးပြုပြီး Download လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသာကြည့်တော့။ မြန်မာပြည်ရဲ့ Internet ကသိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ။ ခရုတိုက်သွားလို့ ရေအောက်ကကြိုးပြတ်ရတာနဲ့၊ Exchange ရုံးက Down တာနဲ့၊ Tower တိုင်​​​ တွေကလိုင်းမမိတာနဲ့၊ SeaGame လုပ်လို့ Bandwidth ထပ်တိုးလိုက်တာ Internet ကြီးပို​ နှေးသွားရတာနဲ့၊ စုံ​ နေ တာပါပဲ။ ကျနည်းမျိုးစုံနဲ့ကို ကျနေတာ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ User တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိန်းမှအဆင်​​ပြေပါလိမ့်မယ်။
User Computer တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုမထိန်းသင့်ဘူး
User Computer ​တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုမထိန်းသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ Internet ကသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဒီလောက်ကျနေတာတောင် Internet Bandwidth ကိုထိန်းမယ်ဆိုရင်တော့ Google Page တောင် တက်ဖို့တော်တော် စောင့်ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ Internet Bandwidth ကိုထိန်းလိုက်ရင် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ 10 MB ​လောက်ရှိတဲ့ File Size ကြီးကို Email နဲ့ Attach ပို့ပါပြီတဲ့။ တစ်ရေးပါအိပ်လို့ရလောက်တယ်။ Internet Speed ကြောင့်အလုပ်တွေပါထိခိုက် ရတယ်။ တကယ်လို့သာသင်ရော Internet Bandwidth ကိုထိန်းခံရပြီး အလုပ်ကိစ္စ မပြီးစီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ User တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုမထိန်းမှ အဆင်​​ပြေပါလိမ့်မယ်။
ကဲ…. ဒီဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုမှာ သင်ရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ????
User Computer တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကိုထိန်းသင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် မထိန်းသင့်ဘူးလားဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သင်လည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်တစ်ခု၏ လမ်းထဲတွင် ရုတ်တရက် လူများစုပြုံ ရောက်လာသည်။ ”ဟာ .. ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ”၊ ”ဘယ် လိုဖြစ်တာလဲ”၊ ”မြန်မြန်ဆွဲထုတ်မှ ဖြစ် မယ်”၊ ”ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်”ဆို သော အာမေဋိတ်နှင့် မေးခွန်းတွေက လူ အယောက် ၂ဝ ခန့် ရှိသော နေရာမှပေါ် ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူလည်း ဈေးရောင်းလက်စကိုထား ခဲ့ကာ ထိုနေရာသို့ ပြေးသွားခဲ့သည်ဟု အသီးအနှံရောင်းချသည့် ဒေါ်သန်းသန်း က ပြန်ပြောင်းပြောကြားသည်။ ဘာဖြစ် တာလဲလို့ သူမေးကြည့်တော့ ကလေးတစ် ယောက်ကို ကားဘီးနဲ့ကြိတ်မိသွားလို့ဆို သည့် အသံကလူအုပ်ထဲက ပြောခြင်းဖြစ် သည်။ သို့နှင့် သူလည်း လူအုပ်ထဲကို တိုး ဝှေ့ကြည့်ရာ ကားဘီးအောက်ရောက်နေ သော အသက် ၁ဝ နှစ်အရွယ်ကောင်လေး တစ်ဦး။ လူအုပ်ထဲရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးက ”ကလေးက သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂေါ်လီ လုံးလှိမ့်တမ်း ကစားနေကြတာ။ အဲဒီနား မှာပဲ ကားကလည်း နောက်ဆုတ်နေတာ။ ကလေးရဲ့ဂေါ်လီလုံးက ကားဘက်နားကို ရောက်သွားလို့ ငုံ့ကောက်နေတဲ့အချိန် ကားက လည်း နောက်ဆုတ်လိုက်တော့ ကားနောက်ဘီးနဲ့ ကြိတ်မိသွားတာပဲ”ဟု ပြောရင်း ကလေးကို ဆွဲထုတ်ကြသည်။ ကလေးမိဘတွေက ဆေးရုံပို့ဖို့ ခေါ်သွား မှပင် သူလည်း မိမိဈေးဆိုင်သို့ ပြန်ရောက် ရှိလာသည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
သူသည် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ် သည့်နေရာနှင့် ပေ ၅ဝ အကွာအဝေးတွင် ရှိသည့် ဈေးဆိုင်တွင်ဈေးရောင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ် သည် နိုဝင် ဘာ ၃ဝရက်က အင်းစိန်မြို့ နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ဒီနေ့ထိတော့ အဲဒီကလေးသတင်း ဘာမှမကြားရသေးဘူး။ ဆေးရုံတင်ထား တုန်းပဲ။ အဲဒီကလေးက သူတို့အိမ်ရှေ့ နားက ကွင်းပြင်မှာဆော့နေကြရင်း ဖြစ် သွား တာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး”ဟု ဒေါ်သန်းသန်းက လေးလံသည့် သက် ပြင်းချကာပြောသည်။ ကားများဖြင့် ရှုပ်ထွေးလှသည့် လမ်းမ ကြီးများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မဟုတ် သည့် အတွက် ပို၍ပင်ယူကြုံးမရဖြစ်နေကြသည် ဟု ထိုစဉ်က မြင်ကွင်းအရ သူကပြော သည်။ ”ရပ်ကွက်ထဲမှာက ဆိုင်ကယ်တွေ အရမ်းများတော့ ဆိုင်ကယ်တိုက် မှာ ပဲ ကြောက်နေရတယ်။ အခုက ကားက လည်း နောက်က လွတ်တာပဲဆိုပြီး ဆုတ် လိုက်တော့ဖြစ်သွားတာ”ဟု ဈေးရောင်း ရင်းဆိုသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် တစ်မိနစ်လျှင် ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး ကလေးငယ်များမှာ သုံး မိနစ်လျှင်တစ်ဦး သေဆုံးနေကြောင်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယာဉ်တိုက်မှုသည် အခြား သော နာမကျန်းရောဂါများထက် ပိုများ ပြီး သေဆုံးမှုတွင် ဒုတိယနေရာရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယာဉ်စီးရေ တစ် သိန်းလျှင် တစ်နှစ်ပျမ်းမျှလူသေနှုန်းမှာ ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အင်ဒို နီးရှားတို့၌ အများဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ပဉ္စမနေရာတွင်ရှိသည်။ခရီးသည်တင် အထူးယာဉ် လိုင်းမှ စပယ်ယာတစ်ဦးက”ယာဉ်တိုက်မှုတွေ က နေ့တိုင်းလိုလို တွေ့နေရတာပဲ။ တစ်နေ ရာမဟုတ် တစ်နေရာမှာ တိုက်နေကြတာ ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ စပယ်ယာတွေက လမ်း ပေါ်မှာပဲတစ်နေကုန် အချိန်ပြည့်ရှိနေ တော့ ယာဉ်တိုက်မှုမဖြစ်ဖို့ကိုပဲဆုတောင်း နေရတယ်”ဟု ဆိုသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှု လျော့ကျစေ ရန်နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန် အတွက် လမ်းအသုံးပြုကြသည့် ယာဉ်နှင့် လူအများ စည်းကမ်းလိုက်နာရမည်ဖြစ် သည်လူတစ်ဦးတစ်ယောက် စည်းကမ်း လိုက်နာရုံနှင့် ယာဉ်မတော် တဆမှု လျော့ ကျမည်မဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းသည်ပင်လျှင် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အောက်တိုဘာလ ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် ယာဉ်နှင့်ယာဉ်ချင်း တိုက် မှု ၈ဝ၊ ယာဉ်မှလူ ၇၅ မှု၊ ယာဉ်မှ ဆိုက်ကား ၈ မှု၊ ယာဉ်မှ စက်ဘီး ၁၂ မှု၊ ယာဉ် မှအရာဝတ္ထု ၂၅ မှု၊ စက်ဘီးမှ လူ ၁ မှုနှင့် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ၁၃ မှု ရှိကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ ခွဲမှူး (ရန်ကုန်) မှသိရသည်။ လမ်းပေါ် တွင် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက် သောယာဉ်များကို နေ့စဉ်တွေ့နေရကြောင်း၊ လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းနှင်ခြင်း၊ ယာဉ်နှစ် ထပ်မရပ်ရသည့်နေရာ၌ ရပ်ခြင်းစသည့် တစ်နည်း မဟုတ်တစ်နည်းဖြင့် စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်သည့်ယာဉ်များကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိကြောင်း ယာဉ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ယာဉ်ကြောကျပ်မှုများတွင် ယာဉ်မောင်း မကျွမ်း ကျင်ခြင်း တို့ကြောင့် အဓိကဖြစ်ပြီး လမ်းဖြတ်ကူးသူများ၏ပေါ့ ဆမှုကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဝါရင့် ယာဉ်မောင်း လုပ်သက် ရှိသူ များက သုံး သပ်သည်။ ယာဉ်မောင်းလုပ်သက် ၁၆ နှစ်ရှိသူ ဦးလေးမင်းက ”မြန်မာနိုင်ငံက လိုင်းကား အကုန်လုံး က တစ်စီးနဲ့တစ်စီးလုယက် ကျော်တက်ပြီး မောင်းနေရတာ။ အဲဒီလို လိုင်းကားတွေ စည်းကမ်းဖောက် ပြီး လု ယက်ကျော်တက်ပြီး မောင်းစားနေရတာ လေ”ဟု ဆိုသည်။
ယခင်က မိမိနေအိမ်မှ လုပ်ငန်းခွင် သို့ ရောက်ရှိရန် ကြာမြင့်သည့်အချိန် ထက် တစ်နာရီဝန်းကျင်ပိုမို ကြာမြင့် လာ သည်မှာ မှတ်တိုင်စိပ်သည်အထိ ယာဉ် ကြော ကျပ်ေ နခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ယာဉ် ကြောအ တိုင်း မောင်းနှင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု နေ့စဉ်ခရီးသွားများကဆိုသည်။ ”လိုင်းကားတွေက မှတ်တိုင် မှာ အတိ အကျမရပ် ဘူး။ မှတ်တိုင်မှာအကြာကြီးရပ် ထားတော့ နောက်ကားတွေက လမ်းပိတ် တာပေါ့။ ကားပြိုင်လာရင်လည်း လမ်းအ လယ်မှာ လူတင်လူချလုပ်တယ်”ဟု တာ မွေမြို့နယ်မှ မယဉ်နွယ်က ပြောသည်။
ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် ယာဉ် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာသကဲ့သို့ လမ်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လည်း လမ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လည်း မိမိသွားလိုသော ခရီးကို မြန်မြန်ရောက်လိုသည့် စိတ်ကိုသာ အာရုံ စိုက်သွားလာနေကြရာ သူလည်းမမှန် ကိုယ်လည်းမှား အခြေအနေပင်ဖြစ် သည်။ခရီး သည် များနှင့် ယာဉ်မောင်းများ ၏ ပေါ့ဆမှုများကြောင့် ယာဉ်မတော် တဆမှုများမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများ လာပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် နှစ်စဉ် ယာဉ်မတော် တဆ မှုကြောင့် လူပေါင်း ၂ ဒသမ ၃သန်း သေဆုံးနေခြင်း၌ မဖွံ့ဖြိုး သေးသောနိုင်ငံများတွင် ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိဖြစ်ပွားကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ် ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲမှူးကြီးကျော်ေ ထွးက ပြော သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခရီး သည်တင် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု သည် ဇန်နဝါရီလမှ အောက်တိုဘာလ အထိ ၂၁၇ မှုဖြစ်ပွားပြီး ၇၃ ဦးသေဆုံး ကာ ၇၁၉ဦးဒဏ် ရာရရှိခဲ့ကြောင်း မထသ (ဗဟို)ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းများတွင် ယာဉ်စက်ချို့ ယွင်းခြင်း၊ လမ်းမကောင်းခြင်း၊ မဆင် မခြင်မောင်းခြင်း၊ လမ်းကူးသူပေါ့ဆခြင်း၊ ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်း၊ ယာဉ်မောင်း မကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ခရီးသည်ပေါ့ဆခြင်း၊ အနှေးယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားမှု၊ ယာဉ် မောင်း လိုင်စင်မရှိမှု၊ စည်းကမ်းချိုးဖောက် မှု၊ အရက်သောက် မောင်းနှင်မှုနှင့် အရှိန် ပြင်းမောင်းနှင်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၂၄ ယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်မောင်း လုပ်သက် ၁ဝ နှစ်ရှိသူဦးသန်းဝင်းက ”ယာဉ်ကြောကျပ်တော့ အချိန်ကကြာသွား တယ်။ ရတဲ့အချိန်မှာ အရှိန်ပြင်းမောင်း တယ်လေ။ ဒီလိုမှ မမောင်းရင် ခေါက် ရေမရဘူး”ဟု အရှိန်ပြင်းမောင်းနှင်ရခြင်း အခြေအနေကို ပြောကြားသည်။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ လမ်း၏ ညာဘက်တွင် မောင်းနှင် ရမည်ဆိုသော် လည်း အိမ်စီးကားနှင့် တက္ကစီကားများ ဝင်ရောက်မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့် မိမိ လမ်းကြောင်း မဟုတ်သည့် ယာဉ်ကြော ကိုကျော်တက်မောင်းနှင်ရကြောင်း သိရ သည်။ ဦးသန်းဝင်းက ”လိုင်းကားရဲ့ လမ်း ကြောက ကျပ်လို့အပေါ်ကြောက တင် မောင်းရင် ယာဉ်မောင်းကျော်တက်ဆိုပြီး ဖမ်းတယ်၊ ဖမ်းရင်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး လစ်ရင် လစ် သလို မောင်းရတော့တာပဲ။ ဒီဥပဒေကြီးထုတ်ထားတာ ဘာလို့အပေါ် တက်မောင်းမှာလဲ။ မဖြစ်သာလို့ မောင်း နေရတာ”ဟု ဆိုသည်။ မိမိယာဉ်ကြော အ တိုင်း ပြေး ဆွဲ မည် ဆိုပါက တစ်နေ့တာအတွက် သတ်မှတ် ထားသည့်ေ ခါက်ရေ လျော့ကျလာနိုင် ကြောင်း ပြေးဆွဲမှု ခေါက်ရေလျော့ကျ လာသည်နှင့် ဝင်ငွေ ရရှိမှု နည်း လာ ပါက ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ ငြိုငြင်မှုရှိကြောင်း၊ ယင်း ကြောင့် မိမိတို့ စားဝတ်နေရေးကိုပါ ထိ ခိုက်လာမည်ဖြစ် သည်။
”အရေးကြီးတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ကိုယ် ပိုင်ကားမရှိဘူး။ ဒီအခု သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကိုလိုက်နာမလား၊ Owner စကားကို လိုက်နာမလား၊ ဥပဒေစည်းကမ်း ကို မလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူး။ သူဌေးက ကျေနပ်မှ ကျွန်တော်တို့က ကားမောင်းရ တာအဆင်ပြေမှာ”ဟု ဦးသန်းဝင်းက ဥပဒေ စည်းကမ်းထက် စာဝတ်နေရေးက ပိုမိုအရေးကြီးခြင်းကြောင့် ယာဉ်/လမ်း စည်းကမ်းမလိုက်နာမှုများရှိသည်ကို ပြော သည်။ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း ချ မှတ်ထား သည့်အပေါ် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ လိုက်နာမှုအားနည်းသည်ကိုသာ မြင် ကြပြီး အိမ်စီးယာဉ်နှင့် တက္ကစီယာဉ်များ ၏ စည်းကမ်းဖောက်မှုကို မမြင်ကြကြောင်း ခရီး သည်တင်ယာဉ်မောင်းများက ပြောသည်။
ယာဉ်မောင်းလုပ်သက် ၁ဝ နှစ် ဝန်း ကျင်ရှိသည့် ကိုဘိုမြင့်က ”စည်းကမ်းတကျ မောင်းနေရင်တော့ အရင်ဦးဆုံး ခရီးသည် မရရင် စပယ်ယာက ငြိုငြင် မယ်။ အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကို မမောင်း ခိုင်းချင်တော့ဘူး။ ညကျရင် Owner နဲ့ ရှင်းရမယ်။ အဲဒီအခါ အသက်မွေး ဝမ်း ကျောင်း အလုပ် ကိုထိခိုက်တယ်”ဟု ယာဉ် စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း မလိုက်နာရ ခြင်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ အောက်တိုဘာ လအထိ မှတ်တိုင် မရောက်ရပ်မှု ၁ဝ၃၂ မှု၊ ဝတ်စုံမဝတ်မှု ၉၄၇ မှု၊ ယာဉ်စီးခ နှုန်းထားမပါမှု ၆၄၈ မှု၊ တံခါးဖွင့် မောင်း ၅၅ဝ မှု၊ လိုင်စင်/လိုက်ခွင့်မပါမှု ၃၂၂ မှု၊ မှတ်တိုင်မရောက်မီခရီးသည် တင်/ချ မှု ၂၇၇ မှု၊ စစ်ဆေးစဉ် ကားမရပ်မှု ၁ဝ၈ မှုနှင့် အခြားသောစည်းကမ်းဖောက်ဖျက် မှု စုစုပေါင်း ၆ဝ၅၁ မှုရှိခဲ့ကြောင်း မထသ (ဗဟို) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ သိရသည်။ ယာဉ်လိုင်းများ၏ စည်းကမ်းဖောက် ဖျက်သော ယာဉ်လုပ်သားများကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ၂၃၃ဦး၊ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ၄၁ဝ ဦးနှင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ အထိ ၂ဝ၇ ဦးထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
ခရီးသည်တင် ယာဉ်များကြောင့် သေဆုံးသူများ၏ အသက်အုပ်စုနှိုင်း ယှဉ်ပါက အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အ တွင်း အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံး မှာ ၄၆ နှစ်မှ ၆ဝ နှစ် အထိဖြစ်ကြောင်း၊ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားသော ယာဉ်မောင်း များ၏ အသက်အုပ်စု နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၅ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်း အများဆုံးဖြစ်ပြီး ၄၅ နှစ်မှ ၆ဝ နှစ် အတွင်း ဒုတိယအများဆုံး ရှိကြောင်း သိရသည်။ ယာဉ်မောင်းအများစု ယာဉ်စည်း ကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း မလိုက်နာဘဲ စည်း ကမ်းမဲ့မောင်းနှင်ကြခြင်းသည် ဥပဒေ သက်ရောက်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆရပြီး ၎င်းသည် နိုင်ငံတော်၏ အထွေထွေစီးပွားရေး ကျပ်တည်းလာ ခြင်းမှ ဖြစ်လာသည်ဟု ယူဆကြောင်း လမ်းမတော် ၂ လွှတ်ေ တ်ာကိုယ်စား လှယ်ဦးစိုးဝင်းက ပြောသည်။
ခရီးသည်တင် ယာဉ်မောင်းများက အိမ်စီးယာဉ်နှင့် တက္ကစီယာဉ်များ စည်း ကမ်းမလိုက်နာခြင်းကြောင့် ယာဉ်ကြော ကျပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းယာဉ်များကြောင့် မိမိတို့စား ဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေ လျော့ကျမခံလိုခြင်းကြောင့် စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မောင်းနှင်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဘတ်စ်ယာဉ်မောင်းဦးလေးမင်းက”မြန်မာနိုင်ငံက ယာဉ်လိုင်းတွေက ယာဉ် မောင်း၊ ယာဉ်လုပ်သားတိုင်းဟာ ယာဉ် စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းနားလည်ကြ တယ်။ သိကြတယ်။
ယာဉ်ကြောကျပ်လို့ ပိုက်ဆံ လိုချင်လို့ တစ်စီးနဲ့တစ်စီး ဖိုက်ပြီး မောင်းရင်သာမောင်းကြမှာ” ဟု ပြော သည်။၎င်းက ”အိမ်ကားတွေ၊ တက္ကစီတွေ က ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းမှာ ဘယ် လိုမောင်း ရင် ဘယ်လိုဥပဒေရှိတယ် ဆိုတာ သိလားလို့ မေးကြည့်၊ သူတို့မှာ လိုင်စင်ရှိတာတစ်ခုပဲ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုတွင် အား နည်းချက် များရှိ သည်ကို ထိုကဲ့သို့ပြောသည်။
ကားလမ်းပိတ်သည်ကို အကြောင်းပြ ပြီး လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းနှင်ခြင်း၊ သတ် မှတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း မမောင်းနှင် ခြင်းနှင့် အရှိန်ဖြ င့်မောင်းနှင်ခြင်းတို့ ပိုမို တွေ့လာရကြောင်း ခရီးသည်များက ပြောသည်။
တက္ကစီယာဉ်မောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်အေးက ”အခုက လမ်း ပိတ်တာက တချို့ကားတွေဆို စည်းကမ်း ကိုမသိကြတော့ဘူး။ လိုင်းကားတွေရော၊ အချို့ တက္က စီတွေရော ခရီးသည်ရဖို့ပဲ ကြည့်တော့တယ်။ ကားမောင်းမကျွမ်း ကျင်တဲ့သူတွေများလာတာ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပို တွေ့လာရတယ်”ဟု ပြောသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှု အဖြစ် အများ ဆုံးသော မြို့နယ်များမှာ လှိုင်သာယာ၊ အင်းစိန်၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ လှိုင် မြို့နယ်၊ မြောက်ဒဂုံ၊ တာမွေ၊ သင်္ဃန်း ကျွန်း၊ တောင်ဥက္ကလာပနှင့် မြောက် ဥက္ကလာ ပတို့တွင် အများဆုံးဖြစ်ပွား ကြောင်း သိရသည်။
မထသ(ဗဟို)မှ ဥက္ကဋ္ဌဦးလှအောင် က”စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ စစ်ဆေးရင်တွေ့ရတာကတော့ ယာဉ်/လမ်း စည်းကမ်းတကျမောင်းဖို့ ဒီနေ့လုပ်ပေးခဲ့ တယ်။ နောက်နေ့ အဲဒီနေရာသွားကြည့် အရင်အတိုင်းပဲ။ အဲဒီတော့ ပြုပြင်လိုတဲ့ စိတ်ပဲလိုတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယာဉ်ကြောကျပ်သည့် လမ်းကြောင်း ကိုကြည့်ပါက လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပြီး ကျော်တက်သည့်ယာဉ်စီးရေ ၃ဝ တွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်စီးရေ ၅ စီးခန့်သာ ရှိကြောင်း မထသ(ဗဟို)မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘမြင့်က ပြော သည်။ယာဉ်မောင်းလုပ်သက် ၂၅ နှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်သည့် ဦးမြင့်စိုးက ”အိမ်စီးကား ရော၊ တက္ကစီရော ပိုက်ဆံရှိလို့ ကားဝယ် စီးတာ၊ စည်းကမ်းအရပြောမယ် ဆိုရင် တော့ သူတို့ဘာမှ နားမလည်ဘူး။ ကား ကျတော့လည်း ပိုက်ဆံရှိလို့ ဝယ်စီးလိုက် တယ်။ လိုင်စင်ကျတော့ အဝင်ပြတာ ပေါ့။ ဘယ်လောက်ပေး လိုက် ရင် နောက် နေ့ကျ လိုင်စင် လာယူ အဲဒါမျိုးတွေ”ဟု ပြောသည်။ ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ရန်ကုန် ၂၈၅ မှု၊ မန္တလေး ၁၇၅ မှု၊ ဧရာဝတီ ၁၁၂ မှု၊ ပဲခူး ၁၃၆ မှု၊ စစ်ကိုင်း ၁၂၄ မှု၊ မကွေး ၇၅မှုနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ယာဉ်တိုက်မှုမှာ မွန် ၆၃ မှု၊ ရခိုင် ၂၆ မှု၊ ကချင် ၁၈ မှု၊ ကရင် ၃၆ မှု၊ ရှမ်း ၈၇ မှု၊ ကယား ၈ မှုနှင့် ချင်း ၅ မှုဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
ခရီးသွားပြည်သူများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာသွားလာနိုင်ရန် ”တကယ် ပြုပြင်ဖို့လိုတာက Mind Set ပါ။ ကြီး ကြီးကျယ်ကျယ်မပြောချင်ပါဘူး။ နှမ်း တစ်လုံးတည်းနဲ့ ဆီမဖြစ်ပါဘူး”ဆိုတဲ့ စကားဟာ အားလုံးစုပေါင်း ညီညာခြင်း ကို ရည်ညွှန်းတာ။ အဲဒါကို အယူအဆ တလွဲကောက်ပြီး ”ငါတစ်ယောက်တည်း ပြုပြင်လို့မ ရပါဘူးကွာ”ဆိုပြီး ”ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ”တွေ လုပ်မနေနဲ့ကြပါနဲ့”ဟု လမ်းမ တော် (၂) လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးစိုးဝင်းက တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက် သည်။
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
၅.၁၂.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၄၀၅အချိန် တွံ့တေးမြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တွံတေးမြို့၊ ရွှေဆံတော်ရပ်ကွက် ၊ရွှေဆံတော် (၁၁)လမ်းတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကာ လူတစ်ဦးသေဆုံးကြောင်း သတင်းအရသွားရောက်ရာ သေဆုံးသူမှာ ဦးတက်(ခ)ဦးတိုးမြင့်၊(၆၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးကျော်စိန်သည် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ မီးလောင်းဒဏ်ရာများနှင့် သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ၎င်းသည် လေဖြတ်ဝေဒနာခံစား နေရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍စစ်ဆေးခဲ့ရာသေဆုံးသူသည် ၀၄၀၀အချိန်ခန့်က ဓနိမိ်ုး၊ ဓနိကာ၊ ၀ါးကြမ်းခင်းတဲတွင် တစ်ဦးတည်း အိပ်နေစဉ် ၎င်းတဲအတွင်းမှ အော်သံများကြားရ၍ ပတ်ဝန်းကျင် နေသူများမှထကြည့်စဉ် မီးလောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ၀၄၁၀အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပြီး ဆေးလိပ်မီးမှတစ်ဆင့် စတင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကာ မီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲသူအား တွံတေးမြို့မရဲစခန်း (ပ)၄၃၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၅/၃၀၄ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ဂျာမန်ထုတ် Jagermeister အရက်ကို Red Bullကဲ့သို့ အားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် တွဲဖက်ပေးထားသည့် Jager Bomb ယမကာ အခင်းအကျင်းသည် အနောက်နိုင်ငံများတွင် သိသိသာသာ ခေတ်စား လာသော်လည်း ယင်းသည် အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်မှု တစ်ခုဟု အမေရိကန် ပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့
အရက်ကို အားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် ရော၍ သောက်သုံးခြင်းသည် အရက်ချည်းသက်သက် သောက်ခြင်း ထက် အန္တရာယ် ပိုကြီးမားကြောင်း သုတေသီများက သတိပေးလိုက်သည်။ ဂျာမန်ထုတ် Jagermeister အရက် ကို Red Bullကဲ့သို့ အားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် တွဲဖက်ပေးထားသည့် Jager Bomb ယမကာ အခင်း အကျင်း သည် အနောက်နိုင်ငံများတွင် သိသိသာသာ ခေတ်စားလာသော်လည်း ယင်းသည် အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ် မှု တစ်ခုဟု အမေရိကန် ပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ အရက်ကို အားဖြည့်အချိုရည်နှင့် ရောစပ်သောက် သုံးခြင်းသည် အဘက်ဘက်မှ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီး အရက်စွဲလမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်အောင် ပိုမို လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
လူငယ်ကျောင်းသား (၆၅၂)ဦးကို အခြေခံ လေ့လာခဲ့သော သုတေသန ရလဒ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဒေါက်တာဂျ နီဖာက "ဒီလိုအရောအစပ်ဟာ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများတဲ့အပြင် အရက်များများ သောက်ဖြစ်အောင်လည်း လှုံ့ဆော်တတ်ပါတယ်။ အားဖြည့်အချိုရည်ရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် နိုးကြားနေတဲ့အခါ အရက်ကို ပိုပြီး သောက်လေ့ရှိလာတယ်လေ။ အရက်အဝင်များတဲ့အခါ လူမှုရေး နယ်ပယ်မှာ လက်ခံဖို့ခက်တဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေ ပိုလုပ်ဖြစ်လာတယ်"ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလည်း ဂျာမနီနိုင်ငံမှ သုတေသီ တစ်စုသည် အားဖြည့်အချိုရည်များ သောက်သုံးခြင်းကြောင့် နှလုံးခုန်နှုန်းကို နှေးကွေးသွားအောင် ပြောင်းလဲသက်ရောက်စေကြောင်း ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိထားခဲ့သည်။
ဝိုင်အမ်စီအေတွင် ဝါရင့် အလေးမသမားတစ်ဦး ဝိတ်ပြားပိ သေဆုံး
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် (၉) ရပ်ကွက် မဟာဗန္ဓုလလမ်းရှိ ခရစ်ယာန် ကလျာဏယုဝအသင်း (YMCA) တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က ကာယ ခန်းမဆောင်အတွင်း အလေးမ ကစားနေသူ အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကြီးတစ်ဦး ဝိတ်ပြားပိကာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ခန်းမဆောင်ရှိ အားကစားရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
တာမွေမြို့နယ် ဗျိုင်းရေအိုးစင် ကွက်သစ် ရပ်ကွက်တွင် နေသူ ဦးအောင်ကြီးသည် ယင်းနေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က ကာယ ခန်းမဆောင်အတွင်း တစ်ဖက်ဝိတ်ပြား လေးချပ်စီ ပါရှိသော ပေါင် ၃၀၀ ကျော် ဝိတ်တန်းကို ထိုင်ထ အလေးမ ကစားနေစဉ် လဲကျရာမှ ဝိတ်တန်းတင်သည့် သံတိုင်နှင့် ထိုင်ခုံကြားတွင် ဝိတ်ပြားပါ သံတိုင်မှ ဦးခေါင်းနှင့် ဇက်ပိုးပေါ် ပိလျက် သေဆုံးနေကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“သူက ပုံမှန် ၉ နာရီလောက်ဆို ပြန်နေကျ၊ အဲဒီနေ့က ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်လောက်မှာ ကာယခန်းမဆောင် တံခါးပွင့်နေလို့ တာဝန်ကျ လုံခြုံရေးက ဝင်ကြည့်တော့မှ သူသေဆုံးနေမှန်း သိရတာ။ ဘယ်အချိန်တည်းက ဆုံးနေလည်းတော့ မသိဘူး။ မျက်နှာမှာ အညိုအမည်းတွေတောင် ပေါ်နေပြီ” ဟု အဆိုပါ ခန်းမရှိ လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
သေဆုံးသူသည် YMCA ခန်းမရှိ ကာယဆောင်တွင် အလေးမ ကစားနည်းကို လာရောက် ကစားသည်မှာ နှစ် ၂၀ ကျော် ရှိပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့် နှစ်ရက်ခြား တစ်ခါ လာရောက် ကစားလေ့ ရှိကြောင်း၊ ယင်းနေ့က ၎င်းတစ်ဦးတည်း လာရောက် ကစားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ ရှိပြီး အသက် ၇၀ နှစ်နီးပါး ရှိပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ဆရာဝန်က အလေးမကစားရန် မှာကြားထားကြောင်း ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များ၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။
“သူက ဝိတ်ကစားတာကို အရမ်းခရေစီ ဖြစ်တာ။ အရက်သမားက အရက်နဲ့သေတာ ရှက်စရာ ကောင်းတယ်။ ဝိတ်သမားက ဝိတ်မရင်း သေရတာ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းတယ်လို့ သူအမြဲ ပြောပြောနေတာ” ဟု ကာယ ခန်းမဆောင်ရှိ အားကစားရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဝိတ်တန်းတင် သံတိုင်နှင့် ထိုင်ခုံကြားတွင် ဝိတ်ပြားပါ သံတိုင်နှင့် ပိခဲ့သောကြောင့် ညာဘက် မျက်နှာတွင် ညိုမည်းဖူးရောင် ဒဏ်ရာ၊ နှာခေါင်းသွေးထွက် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ ရရှိကာ သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း၊ အဆိုပါ သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက ပီအာရ် ၀၄၁ ဖြင့် လက်ခံထားခဲ့ပြီး ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ် မြို့မရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၁၁/၁၃ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များဖြစ်သော စိုးမြတ်သူဇာ၊ န၀ရတ်တို့၏ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဆက်နွှယ်ခဲ့ သည်ဟုဆိုသော ရဲစစ်ချက်မှတ်တမ်းများဟု ယူဆရသော အချက်အလက်များကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက် နှာ ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သော Moe Zay Nyein (မိုးဇေငြိမ်း) အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်သွားမည်ဟု ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် မူးယစ်အထူးအဖွဲ့မှ ဒု-ရဲမှူး ခင်မောင်သိန်းက ဒီဇင် ဘာ ၄ ရက်တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မူးယစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုဖြင့် အနုပညာရှင်အချို့ကို ခေါ်ယူ စစ် ဆေးမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း ဒုရဲမှူး ခင်မောင်သိန်းက ပြောသည်။
“အခု လျှို့ဝှက်စစ်ချက်တွေကိုရေးလိုက်တဲ့အတွက် တကယ်သာ ဆက်ဖော်ထုတ်ရတဲ့အမှုတွေဆို ဆက် ဖော်ထုတ်ဖို့ ခက်သွားနိုင်တယ်။ (အကောင့်ပိုင်ရှင်ကို) အထက်က ညွှန်ကြားချက်နဲ့ စုံစမ်းနေတဲ့ အဖွဲ့ရှိ တယ်။ ရေးတဲ့သူကို စုံစမ်းနေတယ်။ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များ ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမယ်”ဟု ၎င်း က ပြောသည်။
Moe Zay Nyein ၏ အကောင့်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး အစီရင်ခံစာနှင့် စစ်ချက်များတွင် နောက်ထပ် ဖော်ပြစရာများ ကျန်ရှိနေသေးသော်လည်း ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်နှင့် ကာယကံရှင်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံမှုများကို ထောက်ထားပြီး ဆက်လက် မဖော်ပြရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်က ဖော်ပြထားသေးသည်။
ယင်းသို့ အရေးယူသွားမည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး Moe Zay Nyein အကောင့်သို့ မဇ္ဈိမက မက်ဆေ့ခ်ျပို့ မေးမြန်းရာ “စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်လို့ အရေးယူခံရမှုတစ်စုံတစ်ရာ ရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာတွေဟာ လုပ်ကြံ အပုတ်ချမှုမပါဘဲ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိစ္စတွေ ဖြစ်တာရယ်။ နောက်ပြီး အာဏာရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေသူတွေရဲ့ ဥပဒေကို သားရေကွင်းလို လိုသလို ချုံ့/ချဲ့ လုပ်နေတာတွေကို ပြည်သူတွေသိရအောင် ထောင့်တစ်ခုကနေ မီးမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တာမို့ ကျွန်တော့်အတွက် လိပ်ပြာလုံပါတယ်”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
အဆိုပါစစ်ချက်များ ရရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မဇ္ဈိမက ဆက်လက်မေးမြန်းရာ အဆိုပါအကောင့်မှ တစ်ဆင့် “ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတချို့ဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက သူတို့နဲ့ပတ် သက်တဲ့ လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းရှိ စာရွက်စာတမ်း အတော်များများကို ရနိုင်သမျှ နည်းလမ်းတွေနဲ့ စု ဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ထိမ်ချန် လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကို အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ကို တင်ပြနိုင်ဖို့ပါ။ ခု အမှုတွဲကတော့ အဲဒီထဲက တစ်ခုပါ။ ဘယ်ကနေရရှိလဲဆိုတာကိုတော့ ပြောပြဖိ်ု့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
မည်သူမဆို အစိုးရ၏ လျှို့ဝှက်စစ်ချက်များကို ဖြန့်ချိဖော်ထုတ် ရေးသားပါက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက် ချက်များအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ ၄ အရ နှစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။
အဆိုပါအချက်အလက်များမှာ Moe Zay Nyein အကောင့်မှ စတင်ပျံ့နှံ့လာခြင်းဖြစ်ကာ တစ်ချိန်က အနု ပညာရှင်များကို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် အနုပညာရှင်များအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိသောကြောင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းများကို ရပ်တန့်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ် ပြန်ထားသေးသည်။
ယင်းသို့ ရေးသားချက်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း သရုပ်ဆောင်စိုးမြတ်သူဇာက သူ၏ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် မှတစ်ဆင့် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ပြန်လည်ပြောကြားထားပြီး အဆိုပါအကောင့်ပိုင်ရှင်ကို မသိသလို မည် သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားထားသည်ကိုလည်း မသိပါကြောင်း တင်ထားသည့် အကြောင်းအရာ များကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ မထောက်ခံသည့်အတွက် လုံးဝအမှန်ဟု မယူဆသင့်ကြောင်း စသည် ဖြင့် ပြန်လည် ရေးသားထားသည်။
စာနယ်ဇင်း မီဒီယာ ကျင့်ဝတ် ပေါ်ထွန်းလာရေး မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီနှင့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)နှင့် IMS မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတို့အား အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်နေစဉ်။
စာနယ်ဇင်းသမားများ မီဒီယာကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာရန် မြန်မာနိုင်ငံစာ နယ်ဇင်းကောင် စီ(ယာယီ)နှင့် International Media Support တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အစိုးရမှ စာနယ်ဇင်းလွတ် လပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည့်အပေါ်တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ရေး သားမှု များ ရေးသားခြင်းများကြောင့် အစိုးရမှ ပြန်လည်ချုပ်ကိုင်မည် စိုးသည့်အတွက် မြန်မာ မီဒီယာ သမားများသည် သတင်းလွတ်လပ် ခွင့်နှင့် ထိုက် တန်ကြောင်း ပြသရန်အတွက် ယင်းသင် တန်းများ အား ဒီဇင်ဘာ ပထမပတ်တွင် စတင်အကောင်ထည်ဖော်မည် ဖြစ်ပြီး ယင်းစီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နိုင်ရန် အတွက် အချိန်အားဖြင့် တစ်နှစ် ကြာမည် ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်း ကောင်စီ(ယာယီ)မှ အတွင်းရေး မှူး ဦးကျော်မင်းဆွေက ''မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ပေး လိုက်တဲ့ အခါမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ပြီး ရေးသား မှုတွေရှိလာတယ်။ ဒီလိုတွေရှိလာ တဲ့အခါကြတော့ အစိုးရ အနေနဲ့ ရော သဘော ထား တင်းမာတဲ့သူ တွေအနေနဲ့ရော အထူးသဖြင့် ပြန် ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရော လွှတ်တော်ကို သွားပြီးတွေ့တယ် မို့လား။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေး လိုက်ရင် ဒီလိုမျိုးတွေရေး လို့ အ တိုင်းတာတစ်ခုထိ ချုပ်ကိုင်ထား ရတာပါဆိုတဲ့ သွေးထိုး စကား (လော်ဘီ)လုပ်မှာ သိပ်စိုး တယ်။ မြန်မာသတင်းသမားတွေက လွတ် လပ်ခွင့်နဲ့ မထိုက်တန်သေးဘူးလို့ ပြောမှာစိုးတယ်''ဟု ပြော သည်။
ယင်းကဲ့သို့ပြောဆိုမှုများ မဖြစ်အောင် မြန်မာမီဒီယာသမား များသည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် နှင့်ထိုက် တန်သည်ဟု ပြနိုင်ရန် အတွက် ယခုကဲ့သို့အရည်အချင်း များမြှင့်တင်ပေးရာတွင် မီဒီယာ ကျင့်ဝတ်အား ရှုထောင့်တစ်ခုအ နေဖြင့်ရွေး ချယ်ခဲ့ ခြင်းပြီး စာနယ် ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)မှ အသိအ မှတ်ပြုသည့် မီဒီယာသင်တန်းများ လည်း လုပ်ဆောင်ပေးရန်ရည်ရွယ် ချက်များရှိကြောင်း ယင်းက ဆို သည်။ ယင်းစီမံကိန်းအား ရန်ကုန် တွင် ပထမဆုံးစတင်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ် ပြီး အခြားသောမြို့ပြကြီး များတွင်လည်း ယင်းတို့၏နီးစပ် သည့်ဒေသများမှ သတင်းထောက် များအား သိရှိရန်နှင့် ယင်းတို့၏အခက်ခဲများအား နားထောင်ရန် အတွက် သင့်လျော်သည့်မြို့ကြီး များတွင် စုရပ်ဖြင့်ထားရှိ၍ဆောင် ရွက်မှု များ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ရာတွင် MJA, MJU, MJN စသည့်အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင် စီ(ယာယီ)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေး က ''အခုလို အားလုံးလက်ခံနိုင် မယ့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ် ပေါ်လာအောင် အစပျိုးနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု စတင်နိုင်လိုက် ခြင်းက မြန်မာစာနယ်ဇင်းလောက အတွက် အရေးပါပြီး လိုအပ်နေ တဲ့ကိစ္စတစ်ခု ဆောင်ရွက်လိုက် ခြင်းဖြစ်တယ်။ စာနယ်ဇင်းနဲ့သက် ဆိုင်သူအားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက် မှ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကျင့်ဝတ်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာမှာ ဖြစ်တယ်''ဟု ပြောသည်။
Posted by drmyochit Thursday, December 05, 2013, under ဗေဒင် | No comments
ယတြာ ။ ။ တာအိုးတစ်လုံး အတွင်းရေထည့် ရွက်လှ ၁၇ ရွက်ထည့်၍မွေးနံဘုရား ထောင့်တွင်လှုပေးပါ ။
တနင်္လာသားသမီး ။ ။ စက်နှင့် ပတ်သပ်သောလုပ်ငန်းလုပ်သူများ အထူးသတိထားပါ ။ ရောင်းမှား ၀ယ်မှားဖြစ်ခြင်း ။ လူလိမ်ခံရခြင်းများ ကြုံတွေ့ ရလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းကလေးများခင်ပွန်းနှင့် စကားများပြီး အိမ်ထောင်ကွဲ သည်အထိဖြစ် တတ်သည် ။ရွှေအထားမှားပြီး ပျောက်တတ်သည် ။ သတိထားပါ ။ငယ်ရွယ်သူမိန်းကလေးများ ကြားစကားကိုယုံမိ၍ ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်လိမ့်မည် ။ တနင်္လာအစ ဗုဒ္မဟူးနံအဆုံးနာမည် ရှင်များ အထူးသတိထားပါ ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်သည် ။ လိမ်လည်ပြီး ငွေချေးသူကြောင့် စိတ်ညစ်ရလိမ့်မည် ။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါ နေ့ညနေပိုင်းတွင် လမ်းဆုံလမ်းခွမှ ခွေးများကိုအစာကြွေးပေးပါ ။
အင်္ဂါ သားသမီး ။ ။ ခြံ ကား ကွန်ပျူတာ စက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်သူများ အထစ်အငေါ့ ဖြစ်မည် ။ မမျှော်လင့်ပဲ ခရီးသွားခွင့် ကြုံ ခဲ့လျှင် ရေလမ်းခရီးကိုရှောင်ပါ အသက်အန္တရယ် ထိခိုက်တတ် ပါသည် ။ အိမ်ထောင်ရှင်များဇနီး မယား ကျမ္မာရေးအတွက် ငွေကုန်လိမ့်မည်။၀န်ထမ်းများ စာရင်းဇယားနှင့်ပတ် သက်ပြီး အထက်လူကြီး၏ ဆူပူခြင်းခံရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူချစ် သူများ စကားပြောမှားပြီ အထင်လွဲကာစကားများ လိမ့်မည် ။ ဦးခေါင်း ခါးတို့ တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်သည် ။
ယတြာ ။ ။ နီးစပ်ရာ တရားစခန်းများမှ ယောဂီများအား ဆေးဝါးလှုါးန်းပေးပါ ။
ဗုဒ္မဟူးသားသမီး ။ ။ အိမ် အဆောက်အဦး ခြံ ကား ကျောက်ရောင်းဝယ်သော လုပ်ငန်းများ စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး အဆင်မပြေဖြစ်မည် ။ ၀န်ထမ်းများ အထက်လူကြီးနှင့် စကားများပြီး အလုပ်မှရပ်စဲခံ ရတတ်သည် ။ ငွေဝင်သော်လည်း ၀င်သလောက်ပြန် ထွက်နေမည် ။ဆေးမှား အစားမှားပြီး ဆေးရုံ ဆေးခန်း ရောက်တတ်သည် ။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကံကောင်း သော်လည်း စိတ်တိုင်းကျသောချစ်သူမျိုးမတွေ့ နိုင်သေးပါ ။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် ချစ်သူမျိုး နှင့်သာ ဖူးစာဆုံနေမည် ။
ယတြာ ။ ။ မိမိမွေးနံ ဘုရား။ထောင့်တွင် အုန်း (၆) ညွန့်နှင့် အစိမ်းရောင်ယပ် ( ၄) ချောင်း လှုပေးပါ။
ကြာသပတေး သားသမီး ။ မည်သည့်လုပ်ငန်း လုပ်လုပ် အကျိုးပေးသောလဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ ကောင်းများ၏ ကူညီမှုကြောင့် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်။ မမျှော်လင့်ပဲ ဘုရားဖူးခရီးသွားရလိမ့်မည် ။ အမွေရသကဲ့သို့ထီပေါက်သကဲ့သို့ငွေ ၀င်မည် ။ ၅ ၄ ၃ ၁ ဂဏန်းများဖြင့် ထီကံစမ်းပါ ။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကံကောင်းနေမည်။ စိတ်အလိုလိုက်ပါက အိမ်ထောင်ကျ သွား နိုင်ပါသည် ။ မိဘ ဘိုးဘွား များကို ငွေကြေးဖြင့်ကန်တော့ပါ ။ စာမေးပွဲ ဖြေထားသူများ ကောင်းသတင်းကြား ရလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ မိမိ အိမ်နားမှ ချို့တဲ့သော ကျောင်းသားများအား ဗလာစာအုပ် လှုပေးပါ။
သောကြာသားသမီး ။ ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်း သံ သဲ သွပ် ရောင်းဝယ်သော လုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေဖြစ်မည် ။အိမ်ထောင်ရှင်များ ဇနီးကျမ္မာရေး ကြောင့် ငွေကုန်မည် ။ အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေပဲ တစ်ဦးဦးနှင့် စကားအကြီးအကျယ် များမည် ။ခရီးသွားလျှင် စိတ်ညစ်ရမည်။ ကားနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ညစ်ရမည် ။ မိမိအိမ် သူခိုးခိုးခံရကိန်းရှိသည်။ သတိထားပါငွေကြေးအရှုပ်အရှ င်းတခု ဖြေရှင်းရတတ်သည် ။ ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူ ၂ယောက်တပြိုင်နက် ထားခြင်းကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။
ယတြာ ။ ။မွေးနံ ဘု ရားထောင့်တွင် သီဟို ( ၂၁) ခက်လှုပေးပါ။
စနေသားသမီး ။ ။ လုပ်ငန်းအသစ်များ မချဲ့ ပါနှင့် ။ ယခုလအတွင်း အဆင်မပြေနိုင်သေးပါ။ ဆန် ဆီ ဆေး စက်ပစ္စည်း စာ အုပ် စာပေ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေမည် ။ မြေကိစ္စ အမွေ ကိစ္စကြောင့် စိတ်ညစ်ရလိမ့်မည် ။ခရီး ယာယီသွားရလိမ့် မည် ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည် ငွေဟောင်း ကြွေးဟောင်းများ မမျှော်လင့်ပဲ ပြန်ဝင်မည် ။ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူ၏ဆိုးနွဲ့ မှု ကြောင့် စိတ်အနည်းငယ်ညစ် ရတတ်သည် ။ ခြေထောက် တွင်ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတတ်သည် ။
ယတြာ ။ ။မွေးနံ ဘုရားထောင့်တွင် ထီးအနီတစ်လက် အုန်း ( ၆ ) ရွက်ကိုလှုပေးပါ ။
ကိုမောင်မောင် ( ဆန်း သုတေသီ )
ဘာသာရေး စော်ကားတဲ့ ဆန္ဒပြမှုကို စုံစမ်း
သံဃာတော်တွေ ပါတဲ့ OIC ဆန္ဒပြပွဲ
အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ OIC ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးကို ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြ ရာမှာ သူတပါး ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ သာသနာ ကို စော်ကား ရာ ရောက်တဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ကိုင်ဆောင်သူ တွေကို အရေးယူဖို့ စုံစမ်း နေတယ် လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပြောပါတယ်။
သံဃာတော် တွေ အပါအဝင် လူပေါင်း တထောင် လောက် ပြီးခဲ့တဲ့လ ၁၅ ရက်နေ့က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ ကြရာမှာ ကိုင်ဆောင် ခဲ့တဲ့ ဆိုင်းဘုတ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်း စစ်ဆေးနေ ကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်း က ဒုရဲအုပ် ဦးထွန်းမွှေးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အခြားသူများ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ စော်ကား သူများကို ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၂၉၅ (က) နဲ့ စွဲဆိုနိုင်ပြီး လက်ရှိ စုံစမ်းမှုတွေ ပြီးရင် ဖော်ထုတ် အရေးယူ သွားမယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ရင်သားပေါ်အောင် ဓာတ်ပုံရိုက်မိ၍ နောင်ဓာတ်ပုံ ဘယ်တော...
အင်ဒိုရှိ မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲရန်ကြံစည်သူက တရားရုံ...
facebook account phone number lock ကျရင် ကိုယ်တိုင...
အမျိုးသားစာပေဆုရှင် ဆရာမ နှစ်ဦးကို အမျိုးသမီး စာေ...
User တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကို ထိန်းသင့်လား၊ မ...
ဝိုင်အမ်စီအေတွင် ဝါရင့် အလေးမသမားတစ်ဦး ဝိတ်ပြားပိ...
စာနယ်ဇင်း မီဒီယာ ကျင့်ဝတ် ပေါ်ထွန်းလာရေး မြန်မာနိုင...